15 EYONA NDLELA ILUNGILEYO YEZAYN MALIK YOKUCHEBA IINWELE KUNYE NEENWELE (2021 ISIKHOKELO) - IINWELE ZAMADODA
Eyona Iinwele Zamadoda I-15 yeZayn Malik yeeNwele
Iinwele zikaZayn Malik, ezifana UJustin Bieber , Ulandelwe ngokusondeleyo ukusukela ekubambeni kwakhe kwiqela lamakhwenkwe, isiKhokelo esinye. Ngelixa iinwele zikaZayn kunye nomculo zitshintshile ngokuhamba kwexesha, inkwenkwezi ye-pop iqhubekile ukuba ngumfanekiso wefashoni oyindoda. Ngesiqu sakhe esitsha njenge-Hollywood elite, nangona kunjalo, kwaqwalaselwa ngokusondeleyo izigqibo zakhe zefashoni ezivelayo, ngakumbi iinwele ezintsha kunye nokukhetha kwesitayile sikaZayn Malik.
Nazi izimvo ezilungileyo zokucheba iinwele zikaZayn Malik ukuzama kulo nyaka. Ngefade okanye i-undercut emacaleni kunye neenwele ezimfutshane okanye ezinde ngaphezulu, ezi zinwele zipholileyo zibukeka zilungile kuzo zonke ii-angles.
1Eyona Zayn Malik yokucheba iinwele
MbiniUhlobo lweZayn's Quiff Hairstyle
4Uhlobo lweShaggy Hairstyle
5Izinwele eziKhuselweyo eziBuyile
6I-Hairstyle ephezulu ye-Knot
7Blonde Buzz Sika
8Iphela ngeenwele zeSpiky
9Olunye uhlobo oluphezulu lweZayn Malik
Eyona Zayn Malik yokucheba iinwele
Ukusuka kwiklasikhi, iinwele zoqobo (umz.i-quiff) ukuya kweenwele ezipholileyo ezipholileyo (umz. Nalu ushwankathelo olufutshane lweenwele ezilungileyo zikaZayn Malik - ukusuka kumbala weenwele ukuya kubude, sigubungele iinwele zakhe eziphezulu kunye nezimfutshane.
Uhlobo lweZayn's Quiff Hairstyle
Kumfanekiso ongentla, uZayn wathumela i-Elvis Presley yakhe yangaphakathi. Iinwele ezahlukileyo zikaZayn, le quiff inezinto zakhe ezixineneyo ezibuyise umva ngentambo eziwela ngokwendalo ngaphambili. Ngelixa isitayile sibonakala singenamsebenzi kwaye sinamagingxi-gingxi, kuthatha isitayile ngononophelo kunye ne-pomade okanye i-wax yokukhupha i-Zayn Malik iinwele ezibonwe apha.
Oku kulahla ukuphela kwe-hawk hawk ngokuqinisekileyo kukucheba iinwele kwasekuqaleni kukaZayn Malik. Isitayile sibandakanya izinto zokwehla kolusu kunye nebrashi ngaphambili. I-shave esecaleni idibanisa ngokugqwesileyo kunye nentshebe ye-Zayn ezemidlalo nayo.
Apha, uZayn Malik ubonakalisa isitayile esine-shaggy yeklasikhi esecaleni. Ukuvela kwii-iHeartRadio Music Awards kwaye baphenjelelwa nguJustin Bieber, uZayn uhlengahlengise inkangeleko efanelekileyo. Endaweni yokucoceka kwekhanda okucocekileyo, icala lika-Zayn linendawo encinci yokujonga intloko. Olu hlobo lweempawu zahlekisa ngamaza atshayelelwa kwicala elingaphambili, kwaye adlakaza amaqhaga amade ngasemva.
Izinwele zikaZayn Malik zilula kodwa zinomdla. Inombala ocacileyo wentloko ogcina iinwele zakhe zityibilika umva kwaye ziphantsi kolawulo, inkangeleko kulula ukuyenza kwakhona. Ukuba ufuna ukwenza le fashoni ngokwakho, sicebisa ukuba usebenzise ijeli okanye ipomade ukugcina iinwele zakho zithe tyaba kwaye zikulawulo.
I-Hairstyle ephezulu ye-Knot
Lo mfanekiso ubonakalisa inwele ephezulu yeqhina likaZayn! Iqhina eliphezulu leklasikhi libonisa ukuphela okuphezulu kunye neenwele ezaneleyo ezishiyekileyo ngaphezulu ukuze zibuyele umva kwaye zixhamle ngentambo yeenwele. I-Malik idibanisa i-shaved-sha-up-do kunye ne-ndevu emfutshane ene-grungy yesitayile esikhethekileyo.
Ukuhambisa ibhendi yamakhwenkwe angaphakathi angama-90, le nwele yeZayn yaziswa kwiVeki yeFashoni yeParis. Apha, sibona uZayn Malik's inwele eziblondi ngohlobo lokusikwa kwe-buzz ngolungelelwaniso, uphawu olwenza imigca yeenwele ezicocekileyo nezithe tye ebunzi / kwingingqi yetempile.
Umahluko phakathi kweenwele zobuso ezimnyama nezirhabaxa kunye neenwele ezigcinwe kakuhle ze-blonde yeyona nto yenza ukuba kubonakale ngathi kupop. Musa ukulibala ukuba olu hlobo luhambo olupheleleyo oluvela kwizinwele ezinde zeZayn Malik wonke umntu sele eqhelile.
Iphela ngeenwele zeSpiky
Olunye uhlobo lwenwele lweZayn olunomdla, uMalik wakhetha ukuba aphele phakathi emacaleni kwaye edayiwe, wanyusa iinwele phezulu.
Xa ipinki yaphela, iinwele zakhe zajika zangaphezulu, isitayile esine-bouffant.
Olunye uhlobo oluphezulu lweZayn Malik
Okokugqibela, iinwele ezintsha zamva zikaMalik zibonisa ukuphela kwakhe okuthandwayo ngamaqhaga e-wavy awayo ngokulinganayo kwicala ngalinye. Ukuba unomdla malunga nezinye iinwele ezipholileyo zikaZayn Malik, nantsi ingqokelela yezinye iinwele zakhe! Nokuba ufuna isitayile esifutshane okanye esineenwele ezinde, sinazo zonke iindlela zakhe zakutshanje zokukukhuthaza!
itshathi yendlu ngokuvumisa ngeenkwenkwezi
zayn malik iinwele ezinde
indawo encinci ebuhlungu kwi tattoos